AirPods iyo AirPods Pro waxay ku jiraan marxalad isbedel | Waxaan ka socdaa mac
Jimcihii la soo dhaafay, falanqeeyaha caanka ah ee Apple Marc Gurman, ayaa faafiyay warar badan oo ku saabsan mustaqbalka AirPods iyo AirPods Pro. Intaa waxaa sii dheer waxaan sidoo kale ka hadlayaa AirPods Max iyo jiilkiisa labaad ee suuragalka ah halkan ayaan ka hadlaynaa.
Waa inaad taas caddeysaa Xanta ku saabsan AirPods iyo AirPods Pro waxay jirtay dhowr bilood shabaqa dhexdiisa. Mid ka mid ah xanta ugu xoogga badan uguna caansan waa tan oo ah cusbooneysiinta jiilka labaad ee AirPods waxaana loogu yeeraa "AirPods 3" muddo bilo ah. Dhinaca kale, ku saabsan AirPods Pro ma jiraan warar xan ah oo aad u badan waxaana la sheegay inay imaan karaan sanadka 2022.
Gurman, sidoo kale wuxuu sheegayaa in jiilkan seddexaad ee AirPods ay yeelan doonaan naqshad aad u la mid ah AirPods Pro laakiin aan lahayn suufka hore. Tani waxay sii xoojin doontaa wararka xanta ah ee ku saabsan headphones-ka Apple iyo qaabeynta. Runtii wax badan kama beddeli karaan naqshadda AirPods waana sababtaas sababta loo dhaho waxay la mid noqon doonaan AirPods Pro laakiin aan lahayn qaybta silikoon, waana inay iyagu hadda yihiin kuwo ergonomic ah iyo naqshad la jaanqaadaysa inta badan dadka isticmaala 'dhegaha.
Waa inaad ka fikirto in usbuuca soo socda si aad u timaado WWDC iyo dhacdadan Apple waxay diyaarineysaa soo bandhigid bilowga shirarka marka tan ama ka dib qodobkan koowaad waxaan arki karnaa imaatinka jiilka saddexaad ee AirPods. Diyaaradahan cusub ee loo yaqaan 'AirPods' ayaa xitaa lagu xaman jiray inay bilaabayaan bartamihii bishaan May Taasi waxay ku egtahay maanta uun, markaa waa inaan sii sugnaano bilaabitaankeeda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirPods iyo AirPods Pro waxay ku jiraan marxalad isbedel ah
Remote Buddy waxaad ku isticmaali kartaa Siri Remote cusub Mac-gaaga